Burma Partnership » Take Action! Petition Calling on Companies to Respect Human Rights of Workers
By In Defense of Charles Hector • May 31, 2011
Mr. Charles Hector,awell-known human rights activist and lawyer in Malaysia, has been highlighting the human rights violations against 31 migrant workers from Burma who have been working with Asahi Kosei (M) Sdn Bhd in Malaysia. He is now being sued by the company for RM10 million (US$3.3 million). Read more about the case in Burmese here or in English here.
A petition has now been launched calling on Ford, General Motors, Chrysler, Volkswagen, Hitachi, Sony, and Toshiba and other major customers of Asahi Kosei, to demand that the suit against Charles Hector be dropped and defense for the workers be allowed to move forward without hindrance.
Learn more about the In Defense of Charles Hector campaign team and follow developments in the case on their blog here.
အလုပ်သမားများ၏ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာရန် ကုမ္ပဏီများသို့ စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုခြင်း
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ လူသိများသော လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ရှေ့နေ မစ္စတာ ချားလ်စ်ဟတ်တာ (Mr. Charles Hector) သည် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Asahi Kosei (M) Sdn Bhd တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၃၁ ယောက်အား အဆိုပါကုမ္ပဏီမှ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေမှုများအပေါ် မီမောင်းထိုး ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ မစ္စတာချားလ်စ်ကို Asahi Kosei ကုမ္ပဏီမှ မလေးရှားရင်ဂစ် ၁၀ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၃ သန်း) လျော်ကြေးပေးဆောင်ရန် တရားစွဲဆိုထားသည်။ အဆိုအပါ အမှုကိစ္စနှင့်ပက်သတ်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဤနေရောတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
မစ္စတာချားလက်စ်ဟတ်တာအား စွဲဆိုထားသောအမှု ပြန်လည်ကြေငြိမ်းပေးရန်နှင့် အလုပ်သမားများ အခွင့်အရေးအတွက် ကာကွယ်ပေးမှုများကို အတားအဆီးမရှိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် Ashahi Kosei အား တောင်းဆိုပေးရန် Ford, General Motors, Chrysler, Volkswagen, Hitachi, Sony, Toshiba နှင့် Asahi Kosei ကုမ္ပဏီ၏ အခြားသော ဖောက်သည်ကုမ္ပဏီများထံသို့ စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုမှု လှုပ်ရှားမှုတရပ်ကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။
သင့်အနေဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုလွှာကို ဤနေရာတွင် အမည်သွားရောက် ရေးထိုးခြင်းအားဖြင့် တဖက်တလမ်းမှ ပါဝင်ကူညီနိုင်ပါသည်။
စုပေါင်းလက်မှတ်များ ကောက်ခံနေသော In Defense of Charles Hector လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အကြောင်းနှင့် မစ္စတာချားလ်စ် အမှုကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ရပ်များကို ဤနေရာတွင် သွားရောက် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
Tags: Burmese, In Defense of Charles Hector, Malaysia, Migrant Workers, Petition